A gam akporo 6.0 Marshmallow News | Akụkọ akụrụngwa
Android 6.0 Marshmallow Ọ bụ ụdị ọhụrụ nke sistemụ arụmọrụ maka igwegharị na mbadamba sitere na Google na ụbọchị ole na ole gara aga na n'ime usoro nke Google I / O 2015 anyị nwere ike ịmara n'ụzọ gọọmentị. Ọ bụrụ na nsụgharị ikpeazụ, nke e mere baptizim dị ka Lollipop, bụ nnukwu mmezigharị na mbata nke Nhazi Ihe, na ụdị ọhụrụ a anyị nwere ike ịsị na nnabata nke ọrụ ọhụrụ na nhọrọ ewerela ụzọ, yana naanị obere obere tweaks na usoro imewe. .
Taa na site n’isiokwu a, anyị ga-eme mbara nyochaa akụkọ kachasị mkpa anyị ga-achọta na gam akporo 6.0 ohuru. N'ezie, ọ dị nwute na oge anyị agaghị enwe ike ịnwale ya ma mee ọtụtụ n'ime ya, belụsọ na anyị nwere otu n'ime ngwaọrụ Nexus dakọtara na ụdị ọhụrụ nke sọftụwia a ma ama.
2 android Ṅaa
3 "Ugbu a na Mgbata", ọrụ ọhụrụ nke Google Ugbu a
4 Nnwere onwe ka mma, USB-C na Doze
5 Enwekwu nchebe na njikwa karịa na ngwa
6 A na-akwado ndị na-agụ mkpịsị aka na mpaghara
Ọ bụ ezie na akwụkwọ ọhụụ banyere nhazi abụghị ọtụtụ dị ka anyị kwuru na mbụ, anyị ga-ahụ ụfọdụ ọmarịcha ihe. Mbụ anyị ga-ahụ a drawer ngwa ohuru nke ga-ebu ụzọ gosipụta akara na ngwa ndị a kacha jiri mee ihe. Na mgbakwunye, mmegharị ya agaghị abụ aka ekpe ma ọ bụ aka nri, mana elu ma ọ bụ ala.
Ọ bụrụ na akụkọ ndị a na igbe ngwa dị gị ka obere, anyị ga-ahụkwa, maka mma, ngwa a haziri n'usoro ederede, iko dị ukwuu iji nwee ike ịchọ ngwa ngwa yana ndepụta ya na mkpụrụedemede niile iji chọta ngwa nke bidoro n’akwụkwọ ozi nke ọ bụla n’ụzọ ọsọsọ.
Changesfọdụ mgbanwe ndị na-adịchaghị mkpa bụ redesign nke wijetị ndepụta na-egosi ugbu a na-ejikọta ya site na ngwa ma ọ bụ ohere ịnweta iwu olu site na mkpọchi mkpọchi.
Obi abụọ adịghị ya na otu n'ime akwụkwọ ọhụrụ dị iche iche nke ọhụụ gam akporo a na-eweta na ọ bụ ọdịda nke android Ṅaa na ngwaọrụ anyị. Ọrụ ịkwụ ụgwọ Google a ga-arụ ọrụ dịka ndị ọzọ dị adị n'ahịa, na-eji teknụzụ NFC ma na-enye ndị ọrụ ohere dị mma mgbe ị na-akwụ ụdị ego ọ bụla.
Ọ bụ ezie na Android Pay na-abịa site n'aka gam akporo 6.0 a Ọ ga-adaba na nsụgharị ndị ọzọ nke ngwanrọ ahụ, kpọmkwem na dịka Google kwupụtara na nsụgharị dị elu karịa Android KitKat. N'ezie, ọ dị nwute na anyị ga-echere oge tupu mba ndị ọzọ na-abụghị United States abịarute.
Kpamkpam na mba ahụ anyị amatalarịị na onye ọrụ ọ bụla nwere ike ịchekwa Visa, MasterCard, American Express na Discover kaadị, ebe AT&T, T-Mobile na Verizon ga-abụ ndị ọrụ mkpanaka sonyere, na-eche ụfọdụ ndị ọzọ ka ha kpebie iwere.
"Ugbu a na Mgbata", ọrụ ọhụrụ nke Google Ugbu a
Google Ugbu a bụ olu olu Google, nke dị na ụwa niile na gam akporo na onye ọrụ ọ bụla nwere ike ịrịọ maka ụfọdụ ozi. Ọzọkwa, ọ bụrụ na anyị hazie ya nke ọma, ọ nwekwara ike igosi anyị ozi na-atọ ụtọ na akpaghị aka.
Nnukwu ọchụchọ ahụ chọrọ onye inyeaka olu ya ka ọ bụrụ naanị onye inyeaka dị mfe yana maka nke a, o kpebie ime ka ọ mara ihe. Ekele maka ọrụ ọhụrụ a na-akpọ "Ugbu a na Mgbata" nke a gabu nwee ike ịchọ ihe gbasara ihe ị na-agụ na ihe atụ web peeji ma ọ bụ ihe a na-ekwu maka ya na mkparịta ụka.
Otu n'ime nhọrọ ọhụrụ anyị nwere ike ịnụ ụtọ bụ ịchọpụta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe ọ bụla n'ụzọ dị mfe. Ọ bụrụ n ’atụ, anyị na-agụ email, anyị nwere ike ị nweta ozi ndị ọzọ gbasara ụlọ oriri na ọ thatụ restaurantụ nke akpọtụrụ naanị site na ịpị na ijide bọtịnụ mmalite. Google Ugbu a ga-egosi anyị ngwa ngwa kaadị ozi metụtara ụlọ nri ahụ.
Tụkwasị na nke a, na iji mechie nhọrọ ndị ọrụ ọhụrụ Google ugbu a na-enye, anyị nwere ike iji ya n'ime ngwa dịka Spotify na ịgwa anyị aha onye ọbụ abụ nke otu abụ ma ọ bụ nke album ọ dị.
Nnwere onwe ka mma, USB-C na Doze
Ọtụtụ n'ime mkpesa ndị ọrụ banyere ngwaọrụ mkpanaka ha nwere gbasara batrị ahụ na ha maara site na Google. Android 6.0 ga-eti ahịa na nnukwu nhọrọ iji gbatịkwuo ndụ batrị, gụnyere ọnọdụ Doze, nke site na ihe mmetụta dị iche iche na-emegharị ga-ekwe ka smartphone ma ọ bụ mbadamba chọpụta ma ngwaọrụ ahụ ọ dị ma ọ bụ na ọ bụghị. Ọ bụrụ na ejighị ya, ọ ga-akwụsị ụfọdụ usoro yana mechie ụfọdụ ngwa ndị na-achọghị ka emeghere n'oge ahụ.
Ọzọ ọhụrụ na anyị nwere ike ịhụ ga-abụ ndakọrịta nke USB-C ma ọ bụ USB Type C nke ahụ ga - enyere anyị aka ijikọ eriri USB na - akwụ ụgwọ n'ọnọdụ ọ bụla. Ebubo a ga-agbakwa ihe ruru okpukpu anọ karịa ka ha dị ugbu a.
Enwekwu nchebe na njikwa karịa na ngwa
Anyị nwere ike ikwu n'enweghị nsogbu na gam akporo adịlarị sistemụ arụmọrụ echekwara nke ọma, mana Google chọrọ ịga otu nzọ ụkwụ n'ihu yana ụdị ọhụrụ a chọrọ ka gam akporo 6.0 bụrụ nke nwere nchebe karị Ọ na-emekwa ka anyị nwee ike ịchịkwa ngwa anyị rụnyere na akụkụ nche.
Maka ihe a niile, mgbe anyị wụnye ngwa na ụdị ọhụrụ nke gam akporo, anyị agaghị ahụ ozi ikike ahụkarị, nke anyị niile na-anabata na-enweghị nnukwu nlebara anya, mana ikikere ndị a ga-arịọ ndị ọrụ oge ọ bụla ha dị mkpa.
Nke a ga - enye anyị ohere, iji ma atụ, iwepu ọnọdụ nke ụfọdụ ngwa ndị anyị na - echeghị na ha nwere ya.
A na-akwado ndị na-agụ mkpịsị aka na mpaghara
Somefọdụ ngwaọrụ mkpanaka sitere na Samsung, HTC ma ọ bụ Huawei enweelarị njikọta akara mkpisiaka nwere ike iji mee ihe dị iche iche, agbanyeghị site ugbu a gaa na ọbịbịa nke gam akporo ọhụrụ 6.0, ndị na-agụ akwụkwọ a ga-enwe afọ ojuju na ngwanrọ ahụ, nke doro anya ga-abụ nnukwu uru maka ndị nrụpụta niile.
Tinyere ihe ndị ọzọ, ihe ọhụụ a ga - enye anyị ohere ịga ọtụtụ ọnụ ọgụgụ ndị ọzọ na ndị na - agụ akwụkwọ mkpịsị aka na yana ejiri ndị a, dịka ọmụmaatụ, iji nye nchebe ka ukwuu ma ọ bụrụ na ọ ga - ekwe omume na ekwentị na mbadamba.
Ọ bụrụ na ị wụnyela ma nwalee gam akporo 6.0 Marshmallow, ị ga-aghọta n'ụzọ zuru oke na ọ bụghị nnukwu mgbanwe na ọkwa ọhụụ, ọkachasị dị ka Android 5.0 Lollipop mere. Mgbe m rụnyere ya na ngwaọrụ Nexus, enwere m nkụda mmụọ n'ihi na m tụrụ anya na mgbanwe ndị ọzọ na ọkwa ịchọ mma na nke imewe karịa otu na-achọta mgbe e mesịrị.
Ozugbo obere ndakpọ olileanya ahụ gafere, mmadụ ghọtara na ụdị nke gam akporo a na-enye nnukwu ọrụ ọhụụ na nhọrọ dị egwu. Tụkwasị na nke a, emeela m nkwubi okwu na anyị na-eche gam akporo 5.0 tozuru okè ihu ma kwadebe ka ọ bụrụ otu n'ime gam akporo kachasị mma anyị hụworo, ọ bụ ezie na ha kpebiri ịgbanwe aha ahụ gam akporo 6.0 Marshmallow.
Kedu ihe ị chere banyere isi akụkọ anyị nwere ike ịhụ na gam akporo 6.0 ọhụrụ yana na anyị enyochala n'isiokwu a?. Can nwere ike inye anyị echiche gị na oghere edebere maka nkọwa na edemede a ma ọ bụ site na netwọkụ mmekọrịta ọ bụla anyị nọ ugbu a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Ndị a bụ isi akwụkwọ akụkọ ọhụrụ gam akporo 6.0 Marshmallow
ọcha osorio tapia dijo
Na-arụ ọrụ maka Samsung galaxy 4
Zaghachi blanca osorio tapia